Pfungwa iyi yeIOS 12 inoratidza nyowani yekuvharira screen uye muyenzi mode | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | | iOS, iOS 12
Iyo tsika kuti mune yega WWDC tinoona kufambira mberi kweiyo matsva mashandiro zvegore rino. Mumwedzi mishanu chete tichaona mavhezheni matsva eIOS, macOS, tvOS uye watchOS. Munzvimbo ino yenguva isu tichaona pfungwa pamusoro peaya masisitimu anoshanda yakagadzirirwa kutora izvo zvinonyanya kushandiswa nevashandisi kuona mune zvinyorwa.
Mune ino iOS 12 conept yakagadzirwa na Kukwira Nhau isu tinoona yakagadziridzwa zvishoma sisitimu maererano nedhizaini, yekuvharira skrini ine notisi dzakapatsanurwa nemaapplication, muenzi modhi, simba chairo rekuchengetedza mamiriro uye kugona kudzora kupinda kune maapplication neFace ID.
Chiso ID seiyi kiyi yekuwana kunyorera: iOS 12 pfungwa
Imwe yeshanduko yekutanga yatinocherekedza nharaunda yekushongedza ndiko kutsakatika kwezita remaapplication ari pazasi pechiratidzo pahwindo repamba. Izvi zvinobvumidza kune yakanyanya kuchenesa uye yakaenzana dhizaini, asi isu tichafanirwa kuziva kuti ndeapi mashandisiro atinawo ne icon uye kwete nezita rayo.
Uye zvakare, mune pfungwa yeIOS 12 tinoona kuti iyo Chiso ID kugona kuvhura mafomu kuitira kuti iye chete muridzi weiyo iPhone awane iwo. Kutanga kubva pane ino pfungwa, iyo muenzi mode, imomo matinogona kusarudza kuti ndeapi mafomu anokwanisa kupinda munhu asiri muridzi, kuti tikwanise kusiya iPhone tisingakanganise data redu.
In the chidzitiro chemba isu tinoona kuchinjika kwekuti zviziviso zvinoratidzwa sei. Mune ino pfungwa tinoona maitiro ekuzivisa richaungana nezvikumbiro, izvo zvinotibvumidza isu kuona nemaziso kuti tine mangani uye kubva kune ipi app. Kune rimwe divi, kune chaiyo yekuchengetedza modhi zvinoenderana nekuremadza mamwe mapikiseti achideredza simba zvinodiwa, uye kuchengetedza bhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Iyi iOS 12 pfungwa inoratidza nyowani yekukiya skrini uye yevaenzi maitiro
Iwe unoda kutsanangura chii gehena iwe chaunoda mushandisi modhi pane iyo iPhone ye?
Ngatione kana kuzivisa kwacho kuri kwechokwadi, nekuti zvinoita sekusinganzwisisike kuti havana kukwanisa kuzvimisikidza nezvikumbiro kusvika parizvino, nekuti zvinonzwisisika uye zvinonakidza kune vashandisi nenzira iyi. Chinhu chekuchengetedza magetsi chinofanira kunge chichionekwa kuti chinoshanda.
Apple inopemberera Rio Carnival nevhidhiyo nyowani inosimudzira iyo iPhone X